ရခိုင်အရေး ဂျပန်နဲ့ ဗြိတိန်နိုင်ငံတို့က ထောက်ပံ့ကူညီ ပေးမယ် | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင်း ပြည်တွင်းသတင်း ရခိုင်အရေး ဂျပန်နဲ့ ဗြိတိန်နိုင်ငံတို့က ထောက်ပံ့ကူညီ ပေးမယ်
ရခိုင်အရေး ဂျပန်နဲ့ ဗြိတိန်နိုင်ငံတို့က ထောက်ပံ့ကူညီ ပေးမယ်
ရခိုင်အရေးမှာ ဂျပန်နဲ့ ဗြိတိန်နိုင်ငံတို့က နည်းပညာဆိုင်ရာ အကူအညီအထောက် အပံ့တွေ ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီး အစိုးရရဲ့ရခိုင်အရေးလုပ်ဆောင်ချက်တွေကို ဂျပန်က ဆက်လက်ထောက်ခံသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အောက်တိုဘာ ၁၂ ရက်က နေပြည်တော်မှာ လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာ ချထားရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးနဲ့ ဂျပန်သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Tateshi Higuchi ၊ ဗြိတိန်သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Andrew Patrick တို့ သီးခြားစီ တွေ့ဆုံတုန်း ပြောဆိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရခိုင်အကြံပေးကော်မရှင်၏ အကြံပြုချက်တွေကို အကောင်အထည်ဖော်ရာမှာ ဂျပန်နိုင်ငံက ပူးပေါင်း ပါဝင်ကူညီပေးမယ့်ကိစ္စများ၊ နိုင်ငံတော်က ထိထိရောက်ရောက် ဆောင်ရွက်နေတဲ့ အကူအညီပေးရေး လုပ်ငန်းများအား သိရှိပြီး ဂျပန်နိုင်ငံအနေနဲ့ ဆက်လက်ထောက်ခံသွားမယ့်ကိစ္စ၊ ရခိုင်အရေးနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဗြိတိန်နိုင်ငံက မြန်မာနိုင်ငံကို နည်းပညာဆိုင်ရာ အကူအညီအထောက်အပံ့နဲ့ အခြား လိုအပ်တဲ့ အကူအညီများပေးမယ့် ကိစ္စရပ်တွေ ဆွေး နွေးခဲ့ကြတယ်လို့ အစိုးရသတင်းမှာ ဖော်ပြပါတယ်။(USA)
ရခိုငျအရေး ဂပြနျနဲ့ ဗွိတိနျနိုငျငံတို့က ထောကျပံ့ကူညီပေးမယျ
ရခိုငျအရေးမှာ ဂပြနျနဲ့ ဗွိတိနျနိုငျငံတို့က နညျးပညာဆိုငျရာ အကူအညီအထောကျ အပံ့တှေ ပေးသှားမှာဖွဈပွီး အစိုးရရဲ့ရခိုငျအရေးလုပျဆောငျခကျြတှကေို ဂပြနျက ဆကျလကျထောကျခံသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။
အောကျတိုဘာ ၁၂ ရကျက နပွေညျတျောမှာ လူမှုဝနျထမျး၊ ကယျဆယျရေးနှငျ့ပွနျလညျနရော ခထြားရေး ဝနျကွီးဌာန၊ ပွညျထောငျစု ဝနျကွီး ဒေါကျတာဝငျးမွတျအေးနဲ့ ဂပြနျသံအမတျကွီး H.E. Mr. Tateshi Higuchi ၊ ဗွိတိနျသံအမတျကွီး H.E. Mr. Andrew Patrick တို့ သီးခွားစီ တှဆေုံ့တုနျး ပွောဆိုဆှေးနှေးခဲ့ကွတာ ဖွဈပါတယျ။
ရခိုငျအကွံပေးကျောမရှငျ၏ အကွံပွုခကျြတှကေို အကောငျအထညျဖျောရာမှာ ဂပြနျနိုငျငံက ပူးပေါငျး ပါဝငျကူညီပေးမယျ့ကိစ်စမြား၊ နိုငျငံတျောက ထိထိရောကျရောကျ ဆောငျရှကျနတေဲ့ အကူအညီပေးရေး လုပျငနျးမြားအား သိရှိပွီး ဂပြနျနိုငျငံအနနေဲ့ ဆကျလကျထောကျခံသှားမယျ့ကိစ်စ၊ ရခိုငျအရေးနဲ့ ပတျသတျပွီး ဗွိတိနျနိုငျငံက မွနျမာနိုငျငံကို နညျးပညာဆိုငျရာ အကူအညီအထောကျအပံ့နဲ့ အခွား လိုအပျတဲ့ အကူအညီမြားပေးမယျ့ ကိစ်စရပျတှေ ဆှေး နှေးခဲ့ကွတယျလို့ အစိုးရသတငျးမှာ ဖျောပွပါတယျ။(USA)
Previous articleအာနန်ကော်မရှင် အစီရင်ခံစာကို လမ်းပြမြေပုံအဖြစ်သုံးဖို့ ကုလမှာ ပြောမယ်
Next articleကျောင်း အာဟာရ အစီအစဉ်မှာ WFP ပါဝင်ဖို့ အစိုးရ ဖိတ်ခေါ်